Umkhuleko WeWundlu Elincane Elimnene? Tame, Dominate and Tie [Bathandwa]
Umkhuleko wewundlu elincanyana. Iwundlu elincane kwakuyisilwane uNkulunkulu asisebenzisa ukuhlanza izono zomhlaba. Kungakho i umkhuleko wewundlu elimnene Kuyisenzo sokukholwa esuselwa emibhalweni engcwele.
Lo mkhuleko wenziwa ngezinhloso eziningi ngokuya ngezidingo onazo.
Kodwa-ke, injongo ethandwa ukwedlula ukuthambisa umuntu njengoba iwundlu liwuphawu lobumnene.
Imelelwa ngesimilo sesilwane esithi, ilele esiswini saso, sikhombisa ukuthula kokuba yiso.
Lapho kuceliwe, kubhekiselwa kulo mlingiswa, ikakhulukazi ukucela ukuthi kube umuntu esimthandazelayo.
1 Umkhuleko wewundlu elimnene
1.1 Umkhuleko wewundlu elimnene for othandekayo
1.2 Thandaza imvu emnene yokwakha, ukubusa nokubopha
1.3 Ukuze ubuse izitha
1.4 Umkhuleko wewundlu elimnene lenduna
2 Ngingasho yonke imithandazo?
Yize iwundlu emnene limelwe yisilwane, lesi yisithombe esingcwele esisetshenziswa amakholwa ukuqondisa imikhuleko yawo.
Izinkomba zenziwa ngewundlu elingcwele eBhayibhelini, ikakhulukazi ku incwadi yevangeli NgokukaSt. John, ngakho-ke, akulutho emfundisweni yobuKristu.
Kubonakala nge-aura ephezu kwekhanda lakho lokho kufanekisela ubungcwele; uphethe isiphambano esifanekisela umhlatshelo awenza ukuze kusindiswe isintu futhi ngokufanayo, ifulege elimhlophe elingabonakala ngemuva libonakala luphawu lokuthula.
Kungumdwebo odlulisa ukuthula, ukuthula nobumnene.
Umkhuleko wewundlu elimnene for othandekayo
Ngikuqinisa (igama lomuntu ofuna ukumodambisa) egameni likaJesu, uMariya noJoseph.
Ngala mazwi ngiyakucabanga futhi… ukuze uze kimi njengewundlu elimnene futhi eligcwele uthando nokunaka kimi, sidalwa sikaNkulunkulu, ngikudinga ukuze ucabange ngami kuphela futhi ukwenze kugcwele uthando.
Ngi ... (igama lakho) liyakucasula, ndoda yami (noma owesifazane).
Egameni lomoya wobukhosi, ngi ... ngilawula izinzwa zakho ezinhlanu, ukwahlulela kwakho, umcabango wakho, nentando yakho: ukuze wena ... uhlale ubuswa-a, uhlale umnene ezinyaweni zami futhi uboshwe ngokuphelele kimi, okwamanje njengasesikhathini esizayo.
Kuthi lapho ngi… ngimbona… (noma yena) angibone. Lapho ngi ... ezwa yena ... (noma yena) uyangizwa. Uma ngi ... ngimbheka u ... (noma yena) uyangibuka. Lapho ngi ... ngithinta yena ... (noma yena) uyangithinta.
Futhi lapho ngi ... ngibubula yena ... (noma yena) uyabubula.
Ngakho-ke izinzwa zakho ezinhlanu, ingqondo yakho, umuzwa nenhliziyo yakho, zizoboshelwa kimi unomphela kumcabango ofanayo. NgoNkulunkulu ngiyakucela futhi ngayo kanye nemvelo engiyifunayo. Amen
Lapho kukhulekelwa imvu emthandayo kothandiweyo, ubumnene bayo buba namandla ngoba akekho ongcono kunaye ongasisiza silondoloze ukuthula esivame ukukulahla ngenxa yezimo esingakwazi ukuzilawula.
Othandweni, iningi lezi zimo eziyinkimbinkimbi zenzeka.
Othandekayo angahlala uziphathe ngendlela engajwayelekile y lokho kuntshontsha ukuthula kwethu kwengqondo. Umkhuleko unamandla futhi kulezi zimo singawubamba.
Amandla amabi abalekela ekhaya lapho iwundlu lihlala likhona emithandazweni yansuku zonke futhi uma likhona kuwo wonke umndeni ke kungcono kakhulu.
Thandaza imvu emnene yokwakha, ukubusa nokubopha
UJesu Kristu unqobile. Njengoba nje leli iqiniso elikhulu, ngiyanqoba ……. inhliziyo ye ……………., ethobekile njengewundlu eza ezinyaweni zami, lapho uJesu Kristu esiya esiphambanweni.
Imvu elithobekile elise-altare, unqobe izitha zami ezimelene nami; kwangathi inhliziyo yami ingaba sesimweni somuntu kuye, njengoJesu Kristu waba yinyama, futhi wathumela uLazaru Ongcwele ukufa Wanqoba, njengoba kufanele nginqobe lesi sitha esingathembekile …… .. Ngababili ngikubuka, ngakubamba ngabathathu, ngegazi likaJesu Kristu inhliziyo yami izokuphula.
Ngibona isitha sami sifikelwe amehlo singaboni futhi izingalo zingenamsebenzi.
Igazi likaJesu Kristu lingibuza, futhi ngeke ngilinike. Ngiyakucela, Nkosi enkulu, ukuthi ungilethe ku ……………., Ukuthi ungilethe kimi, nginikele ezinyaweni zami, unqotshwe futhi udangele: unamandla okunqoba.
Uma kukhona okuthile udeveli zama ngokumelene nami, yebo a Ubulungiswa uyahamba, ngeke anqobe; uma ebeka abavikeli, bonke bazokwenqaba. UJesu Kristu, uzoba nami njengewundlu, futhi lapho ubheka ubukhona bami, wonke umuntu uzodangala.
Lo mthandazo wemvu omncane wokuthambisa, ukubusa nokubopha unamandla amakhulu!
Lomkhuleko kufanele wenziwe ngokuzibophezela okuphelele kude nathi imicabango emibi nemizwa yobugovu.
Ukucela ukukwazi ukubusa nokubopha umuntu akusona isenzo sobugovu kepha wuthando ngoba izikhathi eziningi imibono yomunye umuntu ayicaci futhi kulapha ukuthi lo mthandazo ube yisikhali sethu kuphela futhi esinamandla kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, kusebenza kuphela kwabashadikazi kepha kunoma yisiphi esinye isimo lapho sidinga ukulawula khona ukuze izinto zingalawuleki.
Kodwa-ke, isithako esinamandla kakhulu kulokhu noma yonke eminye imithandazo ukholo olwenziwe ngayo, awukho umthandazo owenziwa ngokukholwa ongatholi mpendulo.
Ukuze ubuse izitha
Iwundlu elithobekile elinobukhazikhazi olithola e-altare, ngisize ukubusa futhi nginqobe zonke izitha ezingimelene nami, ezihlanganisa inhliziyo yami ngokuqinile, njengomzimba wethu uJesu Kristu othandekayo, njengomyalo kuSanta uLazaru owanqoba, njengesifiso Nginqoba isitha sami esikhohlisayo, kulo mzuzu ongcwele ngikubheka, ngiyakubamba futhi ngikubophe, Futhi ngenxa yegazi elachithwa yiNkosi yethu uJesu Kristu, inhliziyo yakhe yaphuka.
Baba wami othandekayo, iNdodana noMoya oNgcwele, Wena onguNkulunkulu munye weqiniso, vumela isitha sami ukuba sizithobe futhi sithule, njengoba indodana yakho engiyithandayo iye esihlahleni.
Ngibona isitha sami siyeza, Nezingalo zakhe ezibuthakathaka futhi ziboshwe ngamehlo, Futhi uma engibuza ngegazi lakho elibusisekile, angisoze ngamnika lona.
Ngiyakucela nkosi yami enkulu ukuthi uze kimi, ngokuphenduka futhi uzinikele ezinyaweni zami, ubuswe, unqotshwe futhi uthambile, ukuze umhlule ngamandla akho amakhulu.
Uma isitha sami sifika sizama okuthile kimi, sibuse inkosi yami futhi singamvumeli, uma efuna ukungithatha angise kwezobulungiswa, umphike noma yimuphi umvikeli abengaba naye. Jesu wami othandekayo kakhulu, uJesu Kristu, njengewundlu uzoba kimi, ngoba lapho isitha sami sibona ubukhona bami, bonke ububi obungifisayo, sibuyiselwa kuye.
Uma ufuna ukubusa izitha, lo ngumkhuleko ofanele wewundlu.
Konke okuntshontsha ukuthula kwethu, okusikhathazayo, kusenza siphelelwe yithemba noma kusenze sizizwe singalondekile yizimo lapho lo mthandazo ungasenza siphinde silawule izinzwa zethu nokuthula kwethu kwangaphakathi.
Ukulawula izimo ezingase ziphakame nabo bonke abaye baziveze njengezitha zethu kungenza umehluko omkhulu emiphumeleni yalezo zimo.
Bangaba izitha zethu noma ilunga lomndeni. Lo mkhuleko onamandla uzosisiza ukuba sigcine izinto sinokuthula thina nawo wonke umuntu.
Noma ngabe yisiphi isimo.
Ngendlela efanayo, wonke la mathonya amabi izitha zethu azilahla ngenzondo nangolaka azogcinwa kude nendawo esihlala kuyo.
Ukuhlanza amakhaya ethu namabhizinisi kunoma iliphi ithonya elibi kubalulekile ukuze kulawulwe ezenzakalweni nasezinqumweni ezihambisana nezitha zethu.
Umkhuleko wewundlu elimnene lenduna
Uma ufuna ukwehlisa futhi uthambise umphathi wakho, ungakhuleka noma yimuphi umusho ngenhla. Kumele ushintshe igama lakho.
Abaphathi bethu kwesinye isikhathi bangenza izimpilo zethu zibe nzima.
Ezimweni eziningi, ukushiya umsebenzi akuyona inketho okufanele icatshangwe futhi kungalezi zikhathi lapho kunconywa ukwenza lokhu umkhuleko ukuze uthambise umphathi wethu futhi ngaleyo ndlela sinciphise ingcindezi yomsebenzi.
Lezi zimo zomsebenzi zivame ukuzizwa zisekhaya nakuyo yonke indawo esikuyo futhi kuyadingeka ukuthi sizikhulule kulokhu kunyakazisa okubi ngaphambi kokudala noma ngubani kumuntu osondelene naye.
Ukukholwa, umthwalo wemfanelo futhi ngaphezu kwakho konke izinhloso ezinhle kufanele kube yinjini yethu ukwenza noma imuphi umthandazo ngoba yilapho kuphela lapho siyothola khona impendulo esiyifunayo.
Kufanele futhi uthandaze kuyo yonke imithandazo.
Into ebalulekile ukuthi Umkhuleko wewundlu omnene uthandaziwe ngokholo oluningi nangokukholwa okuningi ngaphakathi kwenhliziyo yakhe.